Admin | Bakool.net
Maamul-Gobolleedyada Oo Baaq u Diray Dowladda federaalka Ee Somalia
Hoggaamiyayaasha dowlad-gobolleedyada ee ku shirsan magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa dowladda federaalka usoo jeediyay eedeymo culus,iyagoo ugu baaqay inay joojiso faragelinta ay ku heyso. Afhayeenka madasha wada-tashiga dowlad-gobolleedyada,Cabdullaahi Shiikh Xasan oo goor dhow wariyayaasha kula hadlay Garoowe ayaa sheegay dowladda inay si cad markan u dooneyso burburinta maamullada dalka, tallaabada oo u sheegay inay ka hor imaanayso nidaamka federaalka ...
Musharaxa Dowladda Taageereyso C/casiis Lafta Gareen Oo Gaaray Magaalada Baydhabo
Wasiirka Tamarta iyo Biyaha Xukuumadda Soomaaliya C/casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) ayaa goor dhow gaaray magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay, halkaasoo si diiran loogu soo dhoweeyay. C/casiis Lafta Gareen ayaa ka mid ah Musharaxiinta ugu cad cad ee xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed, waxaana lagu wadaa inuu Baydhabo kaga dhawaaqo Musharaxnimadiisa. Wararka ayaa sheegaya in socdaalkiisa ay ku wehliyaan Xildhibaano ka ...
5-kale oo ka mid ah Liiska 30-ka Xiddig ee ku tartameysa Ballon d’Or oo lagu dhawaaqay…(Ronaldo oo 5-tan ku jira)+SAWIRR
Majaladda France Football Magazine ayaa go’aansatay iney maanta soo saarto liiska musharaxiinta 30-ka ah ee u tartami doona abaalmarinta Ballon d’Or, balse qaabka soo gudbinta waa qaab aad u xiiso leh maadaama saacado kadib lasoo gudbinayo shan xiddig oo ka mid ah musharaxiinta. Liiskii ugu horreeyay ciyaartoyda musharaxiinta waxaa kasoo muuqday Gareth Bale, Allison Becker, Karim Benzema, Sergio Aguero iyo Edinson ...
Dowladda Jabaan iyo AMISOM oo dib u dhis ku sameeyay Saldhigga Boliiska Dayniile
AMISOM ayaa Saraakiisha Boliiska Soomaaliyeed ee Gobolka Banaadir ku wareejisay Saldhigga Boliiska Deyniile oo dib dayactir ballaaran ay ku samaysay Dowladda Jaban oo kaashanaysa waaxda arrimaha Bulshada ee Ciidanka Midowga Afrika. Taliyaha Ciidanka Boliiska AMISOM,Mss, Christine Alalo oo munaasabaddii lagu wareejinayay Saldhiggan ka hadashay ayaa sheegtay in ay Soomaaliya ka caawinayaan tayaynta kaabayaasha iyo dhismaha awoodda Ciidanka. Christine Alalo , ...
Arsenal oo heshiis la gaartay shirkada qalabka Sportiga ee Adidas
Arsenal ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay heshiis la gaartay shirkada samaysa qalabka Sportiga ee Adidas. Heshiiskii kooxdu ay kula jirtay PUMA ayaa ku eg dhamaadka xiliciyaareed kaan, labada dhinac ayaana ku guul daraystay inay gaaraan is afgarad cusub. Arsenal and adidas have agreed a new kit partnership, effective from July 1, 2019 pic.twitter.com/ceZzq0elgs — Arsenal FC (@Arsenal) October 8, 2018 Adidas ...
Fulham 0-5 Arsenal Alexandre Lacazette waxa uu si toos ah uga qayb qaatay shan gool, shan jeer oo xillo ciyaareerdkan Premier League kusoo billawday (saddex gool, laba caawin). Aaron Ramsey waxa uu gool dhaliyay isagoo 39 il biriqsi garoonka ku jira, waana goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ciyaaryahan Arsenal beddel ugu soo galo ka dhaliyay Premier League. Ramsey iyo Aubameyang ...
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sidda oo Xukuntay Askari dhac geystay
Dable Booliis Maxamed Cabdikariin Cabdullaahi ayaa laga soo qabtay agagaarka jaamacadaha degmada Hodan xilli uu dhac u geysanayay dadka ka soo baxay salaadda subax iyo kuwa u sii socday Masjidyada ku yaallo xaafadaha degmada Hodan. Dadka degmada ayaa ku war geliyay guddoomiye waaxeedka xaafadda iyo taliyaha rugta Boliiska, waxayna si wada jir ah u sameeyeen howlgal lagu baadi doonayay eedeysanaha, ...
Gonzalo Higuain oo rikoor cusub ka sameeyay AC.Milan
Weerar yahanka reer Argentina ee Gonzalo Higuain ayaa rikoor cusub ka sameeyay kooxdiisa AC.Milan oo uu ku qaadanayo xiliciyaareedkii ugu horeeyay. AC.Milan ayaa shalay galab 3-1 ku garaacday kooxda Chievo oo marti ugu ahayd San Siro, Gonzalo Higuain ayaana dhaliyay 2-gool. Gonzalo Higuain ayaa dhaliyay 6-gool 7-kulan oo uu u saftay AC.Milan, waana bilowgiisii ugu fiicnaa ee koox uu kula bilowdo ee ...